Vehivavy Malagasy niasa tany Koweit Misy voadaroka, voaolana, lasa marary saina…
Nigadona an-tanindrazana ny sabotsy folakandro lasa teo teny amin’ny seranam-piaramanidina eny Ivato ireo vehivavy Malagasy niasa tany
Koweit niharan’ny antsojay sy ny fampijaliana nataon’ny mpampiasa azy tany an-toerana. 46 mirahavavy izy ireo no tonga soa aman-tsara, andiany voalohany raha mbola misy 76 mirahavavy ireo tavela any an-toerana. Raha araka ny fantatra dia ny 12 tamin’ireo 46 isa ireo no nanana olana ara-pahasalamana, ny roa bevohoka, ny iray naolana nandritra ny fotoana nanagadrana azy raha naolana tompon’andraikitra iray eo anivon’ny agence de placement nandefa azy kosa ny iray. Ny telo manana olana any amin’ny saina ( état depressif), ny dimy manana olana any amin’ny taovam-pisefoana… Avy hatrany dia nozahana ara-pahasalamana avokoa mantsy izy ireo raha vao tonga teto an-tanindrazana. Nambaran’izy ireo fa tena mafy ny olana nosedrainy tany Koweit ka nahatonga azy hitaraina tamin’ny filoham-pirenena. Misy amin’ireo mpampiasa mantsy no manao maloto ao an-trano ka tsy maintsy fafana. Tsy matory andro aman’alina ihany koa ireo mpiasa Malagasy fa miasa hatrany ka misy ireo tsindrona zava-mahadomelina mihitsy. Olana rahateo ny tsy fisian’ny masoivoho Malagasy miasa any an-toerana sy ny tsy fitovian’ny fomba fitenenana ka miteraka disadisa eo amin’ny roa tonta. Tamin’ny alalan’ny facebook sy agence de placement tsy ara-dalàna moa no nahafahan’izy ireo nivoaka ny tanindrazana. Alefa hody any amin’ny fianakaviany hatrany izy ireo ary hojeren’ny filoha ankehitriny ny asa tokony homena azy hivelomany.